Uma uzimisela baphumelele ekulweni isisindo okweqile ke abasizi yakho kulokhu kuyoba ngokulinganisela, ziyancipha ikhalori yokudla ngokuqukethwe okusezingeni eliphezulu amavithamini, amaminerali ne-fiber enikeza (ie izithelo, imifino kanye nokusanhlamvu), ukuqina njalo amakilasi, sauna, ukubhucunga kanye ezihlukahlukene Izithako ezisiza ukuba sibhekane ngokuphumelelayo esesuthi ngokweqile futhi ukunciphisa ikhalori ukudla kudliwa, noma ephukile okukhipha amafutha kanye carbohydrate baqashwe. Kukhona futhi izinhlelo ezikhethekile okuhloswe ngaso isisindo ukunciphisa. Omunye wabo - "Slimer Plus for isisindo ukulahlekelwa." Izimpendulo ngakho, kanye izici zako ezisemqoka uzothola kulesi sihloko.
Le nqubo yasungulwa e-United States, igama layo English - slimmer Plus, futhi umsebenzi kusekelwe kulokho okubizwa ngokuthi "umphumela ifremu amabili nanhlanu." Eqinisweni, ubona ulwazi oluthile kusuka amadiski ukuthi ungakwazi oda kuwebhusayithi olusemthethweni hlelo, futhi lakha Uhlaka amabili nanhlanu (ubuchopho bethu uyakwazi ukusingatha ozimele 24 kuphela ngomzuzwana) ethonya ingqondo yakho esesimweni sokungaphili ngokuphelele. Nge wokubuka njalo waphawula umphumela wokuphindelela, okuyinto ikuvumela ukulungisa enidla ukuziphatha. Ngeke ufuna ukudla ebusuku ikhekhe okunamafutha ne ukhilimu, ngoba ubuchopho akuqhubeki mayelana imizwelo futhi uyaqaphela predetermined Uhlelo kwesisindo.
Le ndlela, adalwe IT-e Corporation kanye Center for nokubuyiselwa isisindo ekahle (Ideal Isisindo Control Centres), ngesicelo umkhiqizi, kufanelekile kwabesifazane nabesilisa, futhi ivumela amaviki angu-2 izivakashi njalo ukubonisa disc ulahlekelwe kuze kufinyelele 10-15 amakhilogramu. Yiqiniso, umphumela yiziphazamiso ezihehayo.
"Slimer Plus neminye", ukubuyekezwa zazo muva ingatholakala cishe kunoma iyiphi iwebhusayithi ku kwesisindo - inqubo impikiswano. Odokotela abaningi, futhi abathengi musa ikakhulukazi akholelwa ukuthi, nje ubeke eceleni isikhathi ukubuka ngemoto, wena uzoqala ukuba ulahlekelwe isisindo. Plus "Uhlaka umphumela 25" Isayensi ongakabi kungase kutholakale, futhi umphumela wawo ubuchopho bengayiqondi ngokuphelele. Ngakho uma unquma ukuthenga lezi akwazi ukugcina, kufanele wazi ukuthi wenza kanjalo ngentando yakho. Kodwa luyini ngempela Ayethini labo abaye bazama lo mkhiqizo?
I "Slimer Plus" isisindo ukulahleka: umthengi Izibuyekezo
Okwamanje, kunezinhlobo eziningi okubuyayo ngezithombe elikhanyayo ngaphambi nangemva isicelo ngenxa yendlela entsha yokuzenza, okubonisa langempela kwesisindo, kodwa akunakwenzeka ukuthola amazwana eyodwa udokotela onguchwepheshe noma okunomsoco abangathanda liqinisekiswe noma amelana khona ukusebenza kohlelo. Yiqiniso, izithombe ezinhle ngemifanekiso zamadoda nabesifazane ngemva kwesisindo uye waholela abaningi ngokushesha ngaphambilini amasu, kodwa njengoba kushiwo ngenhla, ucwaningo kalungisiswa, hhayi eqinisekisiwe eRussia, futhi-ke, akekho ngeke akunike ayisiqinisekiso sokuthi khona kwanoma isiphi imiphumela emihle ye abakhiqizi uzobuya imali yakho noma esikhundleni izimpahla.
I "Slender" neminye
Le nqubo ibizwa futhi esekelwe ukusetshenziswa "umphumela Uhlaka 25th", futhi yakhelwe ukuhlola njalo neminye. okubuyayo ngakho futhi igcwele Inthanethi. Ngaphezu kwalokho, ezinye izinkanyezi pop nethelevishini ukukhangisa ku litfuba lekutentela abo emabhulogi, kodwa khumbula ukuthi umphumela kuleli cala futhi asikho isiqinisekiso. Okungukuthi, ithi ayifane uhlelo ngenhla "Slimer Plus" neminye, ukubuyekezwa zazo kungabuye wangabaza. Mhlawumbe isicelo sabo kunalokho kusekelwe kulokho okubizwa ngokuthi i-placebo umphumela - utshelwe ukuthi uzolahlekelwa isisindo, futhi ngakho ingqondo yakho ubukele ukufeza imiphumela. Uhlelo kwasakazwa ku-CD-ROM, okungase ngaphambilini nge-Internet. Uma unquma ukusebenzisa indlela "Slender - neminye," ukuthenga kuphela version ilayisensi kungcono ezibhedlela ezikhethekile noma ezitolo, ohlonishwayo yokuncoma yayo mayelana nesicelo, kanye uthintane uchwepheshe ngaphambi kokuqala amakilasi.
Kuhle Izincwadi Yelena Miro ku kwesisindo
Zezinwele Retro ukuze izinwele ezinde ngezandla zakhe